Soo -saaraha iyo Warshadda Albaabka Laabista ugu Fiican | Dijing
Hadday tahay mid qadiimi ah ama mid casri ah, albaabku lagama maarmaanka u yahay guriga. Waqtiyadii hore, dhammaan albaabada Shiinaha waxay ahaayeen albaabo isku laaban, laakiin markii ay soo ifbaxday taariikhda, albaabbada isku laabma ayaa si tartiib tartiib ah loogu beddelay albaabyo simbiriirixan iyo albaabo fidsan. Si kastaba ha noqotee, qarnigii 21 -aad ee nostalgic, soo jiidashada albaabbada isku laaban ayaa mar labaad la taabtay, waxayna caan ku noqotay qurxinta guriga. Albaabka isku laabma ee sumaddan ayaa u muuqda mid kala qaybinaya laba boos, laakiin ma horjoogsanayso xariiqa aragga u dhexeeya labada boos. Isticmaalka muraayadda hufan waxay si wax ku ool ah u xannibi kartaa buuqa iyada oo aan saamaynayn khadka aragtida. Albaabka isku laabma ayaa loo isticmaalaa in lagu goyn karo balakoonka qeybta xijaabka gudaha, iyo daahfurnaanta muraayadda kama muuqato inay balakoonka ka xirto isku xirka gudaha. Waxay si wax ku ool ah u xannibi kartaa buuqa iyo kala duwanaanshaha heerkulka habeenkii, waxaadna ku raaxaysan kartaa oo ku neefsan kartaa hawo dibadeed maalintii. Albaabka isku laabma waa mid wax ku ool ah oo qurux badan, hubaalna waa doorashada ugu fiican ee qurxinta guriga.
Albaabka isku laabma ee sumaddan waxaa laga sameeyey daahir aad u sarreeya iyo aluminium qaro weyn leh, oo inta badan loo adeegsado maraakiibta iyo xarumaha giraangiraha. Waxay leedahay iska caabin daxalka oo aad u fiican, waa caafimaad, waara, oo ma xuma. Waxay u adkeysan kartaa tijaabinta cadaadiska, waa mid waarta oo riixeysa jiidista, iyo tareenka hagaha oo dhumuc weyn wuxuu ka samaysan yahay qalab adag. Albaabka kala -soociddu waa qaab -dhismeed, oo leh naqshad xarriiq weyn oo magnetic ah, taas oo keenta saamayn xidhitaan oo aad u fiican iyo muuqaal qurux badan oo waara.
Marka la barbardhigo summadaha kale ee suuqa yaal, calaamadahan albaabada isku laabma waxay leedahay dareen adeegsi oo horumarsan:
1. Waxay leedahay wax qabad shaabad sare, xijaab iyo shaqo shaashad. Waxaa jira koronto, buug -gacmeed, kontarool fog iyo noocyo kale.
2. Way ka sii qurux badan tahay, fududahay in la isticmaalo, waxayna badbaadisaa meel bannaan. Noocyada badankoodu waa kuwo caadadu samaysay, oo leh qaabab sheeko cusub iyo midabbo kala duwan, waxaana guriga loogu isticmaali karaa sida qurxinta.
3. Si ka fiican boorka-u-adkeysiga, qoyaan-ka-hortagga, dab-ka-hortagga iyo wax-qabadka dabka. Xitaa waxay leedahay faa'iidooyinka ilaalinta kuleylka, gaashaanka, qoyaan-caddeynta, yareynta buuqa iyo dahaarka dhawaaqa.
4. Acid iyo alkali u adkaysta, daxalka u adkaysta oo si sahlan loo nadiifiyo. Waxaa lagu dabaqi karaa jikada iyo musqusha.
Hore: Daaqadda Daaqadda Daaqadda Taxanaha-Laabidda Si Buuxda U Furmay
Xiga: Taxanaha albaabka oo siibanaya oo culus-furan oo fidsan